Sidee inuu ka soo kabsado Pictures ka SanDisk CF Card on Windows / Mac
Card CF SanDisk, magac la soo gaabiyay ee SanDisk Compact Flash card, waa nooc ka mid ah kaadhka xusuusta caanka ah. Marka la barbar dhigo kaararka kale xasuusta sida kaarka SD, kaarka XD, MemoryStick, iwm, kaarka CF SanDisk leeyahay size weyn iyo xawaaraha si dhakhso ah. Sidaa darteed, waxa uu si weyn u isticmaala in kaamirooyinka digital.
Sida a user card CF SanDisk, waxaa laga yaabaa in aad soo noqnoqotay arrintani, si qalad ah la tirtiro sawiro cusub oo ku saabsan kaarka CF SanDisk; kaarka noqdo kharribeen ama weydiiyo qaab ka hor inta aadan u helaan; sawirrada ah oo dhan lama filaan ah ku seegay, oo wax sidan oo kale. Marka kasta oo ka mid ah dhibaatooyinka kor ku xusan kugu dhacdo, ha noqon xanaaqsan tuur kaarka. Waxa aad u baahan tahay inaad samayso waxaa joojinta isticmaasho kaarka oo iska fogeeya. Waxaa jirta fursad wanaagsan in aad soo kaban karto sawiro ka card CF SanDisk la software soo kabashada.
Sidee inuu ka soo kabsado sawiro ka card CF SanDisk
Ma aha in dhamaan software kabashada runtii waxa ay sheegaysaa. Si ay u soo kabtaan SanDisk card CF photos, waa in aad hesho mid ka mid ah la isku halayn karo. Waa in ay taageeraan SanDisk CF kabashada sawir card, ka website xirfad leh iyo in la siiyo version xor ah tijaabo kuwaas oo kaa caawin kara in aad hubiso in ay shaqo ugu horeysay. Haddii aadan helay mid ka mid ah, waxaad heli kartaa aan soo jeediyo: Wondershare Photo Recovery (la jaan qaada Windows 8/7 / Vista / XP), ama Wondershare Photo Recovery for Mac . Labada iyaga ka mid ah waa 100% lagu kalsoonaan karo oo ay soo saartay shirkadda software xirfad leh koox taageero xirfad leh. Waxaad isticmaali kartaa inuu ka soo kabsado tirtiray, formatted, sawirada iyo Reebnaan yaa kale ee ka maqan card SanDisk CF, iyo sidoo kale kaararka kale, sida kaarka SD. Hawsha oo dhan waxaa dhammaan karaa 3 talaabooyin fudud aan loo eegin in aad tahay Windows ama Mac user a.
Download version maxkamad free of SanDisk card CF kabashada sawir software ka hooseeya hadda. Dooro version saxda ah ee nidaamka. Next, aynu wada isku day version Windows ah.
Step1 Connect kaarka CF SanDisk in kombiyuutarka
Kombiyuutarka Connect kaarka CF SanDisk la akhristaha kaarka, ama si toos ah u xirmaan camera aad kaarka ee isticmaalaya cable ah digital. Markaas abuurtaan software kabashada card SanDisk CF iyo bilaabayso shaqo gujinaya "Start" furmo suuqa hoose.
Step2 Scan sawiro ku yaal kaarka SanDisk CF laga badiyay
Next, kaarka CF SanDisk muuqan doonaa sida warqad drive ah. Waxaa Dooro iyo sii wadaan in ay "Scan", helitaanka photos lumay it on.
Step3 sawirada kulanka xiisaha iyo soo kabsado kaarka CF SanDisk
Skaanka aad qaadan doonta muddo. Dabadiisna, aad natiijo baaritaan ay ku jiraan sawiro oo dhan laga badiyay, videos iyo files audio ka heli doonaa. Waxaad ku eegaan karaa kuwa ka mid ah sawirrada oo ay ka mid iyo "Ladnaansho" iyaga oo dhan la mid click.
Fiiro gaar ah: Ha mar badbaadin xogta soo kabsaday ku qoran kaarka SanDisk CF asalka ah. Raadi meel kale, waayo, sida on your computer ama disk kale dibadda, Ammaanka awgiis.
Video tutorial ah Sandisk CF kabashada sawir card
> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado Pictures ka SanDisk CF Card ee Windows / Mac